श्रीमतीले तपाई बुढो हुनुभयो भनेर ‘गा’ली’ गर्छिन् ! अब के गराैँ ? - Babal Khabar
करुणा जी, नमस्कार ।ठूलो सम’स्यामा छु । कहिलेकाहीं दि’क्कलाग्छ र मनमा अनेकौ कुराहरु खेल्छन् । विवाहपश्चात जीवन सुन्दर हुन्छजस्तो लाग्थ्यो तर संसारको सवैभन्दा दुःखी व्यक्ति हुँ भन्ने अभास भैरहेको छ ।
उनी मलाई बुढो भइसक्नु भयो भनेर गा’ली ग’र्छिन् भने तिम्रो केटाकेटीपन कहिलै गएन भनेर रिसा’उँछु । दुईको उद्देश्य नमिल्दा हाम्रो यौ’ स’म्पर्क कम हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो छोराछोरी पनि भएको छैन ।
अहिले उनको र मेरो दैनिक जीवनको रुची खासै मिल्दैन । उनी सौन्दर्य, सिनेमा र घुमघाममा रुची राख्छिन् भने म उनले चाँडो भन्दा चाँडो जागीर खानु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छु । उनी मलाई बुढो भइसक्नु भयो भनेर गा’ली गर्छिन् भने तिम्रो केटाकेटीपन कहिलै गएन भनेर रि’साउँछु । दुईको उद्देश्य नमिल्दा हाम्रो यौ’ स’म्पर्क कम हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो छोराछोरी पनि भएको छैन ।
टंकजी, बूढो महसूस गर्नु व्यक्तिको चि’न्तन र सोचसँग सम्वन्धित बिषय हो । तपाईको सोच, संस्कार, चिन्तन र कार्यशैली युवा स्तरका छन भने तपाईका हरेक गतिबिधिहरुको नतिजा पनि उ’र्जाशील हुन्छन् । जसरी तपाई कुनै जमानामा अध्ययन शील हुनुहन्थ्यो र परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनु हुन्थ्यो, तपाईले आफूलाई राम्रो क्षमतावान हो भनेर दा’बी गर्नका लागि आज पनि त्यही स्तरको मेहनत गर्नु आवश्यक छ ।
किनकी उसका पनि उमेरजन्य प्राथमिकता र चा’हना अर्कै खालका हुन्छन । बढी उमेरको श्रीमान कम उमेरकी श्रीमतीका लागि साथी भन्दा पनि अभिभावक जस्तो हुन्छ ।तपाईलाई लाखौ रुपैयाँको सोच बनाइरहनुभएको हुन सक्छ । तर श्रीमतीलाई २ सय रुपैयाँको टिकट लिएर फिल्म देखाउँन लैजाँदा त्यो भन्दाबढी स’न्तुष्टि प्राप्तहुन सक्छभन्ने कुरा भुलिरहनु भएको हुन सक्छ
दुबैजना अलग अलग दिशातिर फर्किने हो भने त उपलब्ध संभावनाहरु पनि गु’म्न सक्छन । त्यसैले उमेरको ठूलो फरकबीचका संभावना खोज्नेतिर लाग्नु नै बेस हुन्छ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevरात्रीबसको यात्रामा उ मेरो साथमा……त्यसपछि रातभर उ मेरो काधमा निदाई….
Nextनेपालमा ४ लाख २० हजार रुपैयाँमै नयाँ इलेक्ट्रिक कार पाइने !